အကြောင်း အမျိုးမျိုးကြောင့် တိမ်းရှောင် နေရပေမယ့်လည်း ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ရဲ့မွေးနေ့လေးကို ထူးထူးခြားခြား လေးဆုတောင်းပေးလိုက်တဲ့ ပိုင်ဖြိုးသု – Cele Oscar
ပရိတျသတျကွီးရေ…အနုပညာ လောကမှာ ပရိတျသတျတှေ ရဲ့ခဈြခငျအားပေးမှုကိုအပွညျ့အဝရရှိထားတဲ့ပွညျသူခဈြအနုပညာရရှငျတဈယောကျဖွဈပိုငျဖွိုးသုဟာဆိုရငျ ရုပျရှငျဇာတျကားကွီးတှနေဲ့ဗီဒီယို ဇာတျကောငျးပေါငျးမြားစှာကို ပီပွငျပိုငျ နိုငျစှာနဲ့ကရြာဇာတျရုပျတိုငျးကို အသကျဝငျအောငျသရုပျဆောငျနိုငျနတဲ့အတှကျ အကယျဒမီဆုကွီးကိုလညျးထိုကျထိုကျတနျထနျ ဆှတျခူးရရှိထားတဲ့ မငျးသမီးတဈလကျပဲဖွဈပါတယျနျော…။ပိုငျဖွိုးသု ကတော့ အရမျးကို အေးခမျြးလှနျးပွီးခငျပှနျးကောငျးပီသလှနျးတဲ့ ဒါရိုကျတာဏကွီးနဲ့အိမျထောငျကွပွီး သာယာတဲ့ အိမျထောငျသညျဘဝလေးကိုပိုငျဆိုငျ ထားတာပဲဖွဈပါတယျ။သူမအပျေါအရမျးကိုခဈြခငျပွီးသူမဆိုးသမြှကို သညျးခံခှငျ့လှတျပေးတတျ တဲ့ရခေဲတုံးကွီးတဈမြှအေးခမျြးလှနျးတဲ့ ခငျပှနျးသညျကို ပိုငျဖွိုးသုက ခဈြစနိုးနဲ့ ဦးရခေဲကွီးလို့ချေါခဲ့တာဖွဈပွီး ပရိတျသတျကလညျး ဒီအချေါ အဝျေါလေးကွောငျ့ သုသုကိုပိုပွီးခဈြနကွေတာပဲဖွဈပါတယျနျော။
ပိုငျဖွိုးသုတို့ဇနီးမောငျနှံဟာ ဆိုရငျ လကျရှိဖွဈပျေါနတေဲ့ အခွအေနတှေမှော ပွညျသူလူထုနဲ့အတူ တဈသားတညျးရပျတညျခဲ့တာကွောငျ့ ပရိတျသတျတှကေ သူမတို့ဇနီးမောငျနှံကို လေးစားနေ ကွတာပဲဖွဈပါတယျ။သုသုတို့ဇနီးမောငျနှံက လူထုလှုပျရှားမှုမှာ နစေ့ဉျနတေို့ငျး လမျးပျေါထှကျပွီး ဆန်ဒဖျောထုတျခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျနျော.။အဲ့ဒီလိုလူထုလှုပျရှားမှုမှာပါဝငျခဲ့လို့ သူမတို့ ဇနီးမောငျနှံကို ၅၀၅(က)နဲ့အမှုဖှငျ့အရေးယူခံခဲ့ရတာပဲဖွစိပါတယျနျော.။ အကွောငျးအမြိုးမြိုးကွောငျ့ ထှကျပွေးတိမျးရှောငျနရေပမေယျ့လညျး ရတဲ့ နရောကနေ ပါဝငျနတောပဲဖွဈပါတယျနျော။
ဒီကနဟေ့ာဆိုရငျတော့ ဒါရိုကျတာ ဏကွီးရဲ့မှေးနလေ့ေးပဲဖွဈပါတယျနျော။ပိုငျဖွိုးသုက ခငျပှနျးဖွဈသူဏကွီးရဲ့မှေးနလေ့ေး ကို ထူးထူးခွားခွားလေးဆုတောငျးပေးလိုကျတာပဲဖွဈပါတယျ။ သုသုက”အသကျ(၄၀)မှဘဝကစတာတဲ့…ဦးရခေဲကွီး ဘဝကိုစလုံးရစေရတဲ့ အခြိနျမှာမှ စဈအာဏာသိမျးခံထားရခြိနျနဲ့ကွုံရတာတော့ကကျြသရမေရှိဘူးပေါ့နျော….ဘဝမှာသူ့အတှကျ ဒီမိုကရေ စီအမွနျရရှိပါစေ စဈအာဏာရှငျအုပျခြုပျခံရမှုမှအမွနျလှတျမွောကျပါစေ လို့မှေးနမှေ့ာဆုတောငျးပေးရမယျလို့အိပျမကျတောငျမမကျဖူးဘူး… Anyway, I’ll always be by your side, through thick and thin. Haveapeaceful birthday Boo Bear❤️#အရေးတျောပုံအမွနျဆုံးအောငျပါစေ” ဆိုပွီးခငျပှနျးဖွဈသူ ရဲ့မှေေးနလေ့ေးကို ဆုတောငျးပေး လိုကျတာပဲဖွဈပါတယျနျော။ပိုငျဖွိုး က သူမရဲ့ခငျပှနျးဏကွီးရဲ့မှေးနကေို့ အခုလိုအခွအေနမြေိုးနဲ့ကွုံနရေလို့ စိတျမကောငျးဖွဈနတောပဲဖွဈပါတယျပရိတျသတျကွီးရေ…..။ဒါရိုကျတာဏ ကွီးရဲ့မှေးနလေ့ေးကို ပရိတျသတျကွီးကလညျး ဆုတောငျးမတ်ေတာပို့သပေးခဲ့ကွပါအုံးနျော….။ဖတျရှုပေးတဲ့ပရိတျသတျတဈယောကျခငျြးစီတိုငျးကို အထူးပဲကြေးဇူးတငျရှိပါတယျ…။
Source ; Paing Phyo Thu Facebook acc
ပရိတ်သတ်ကြီးရေ…အနုပညာ လောကမှာ ပရိတ်သတ်တွေ ရဲ့ချစ်ခင်အားပေးမှုကိုအပြည့်အဝရရှိထားတဲ့ပြည်သူချစ်အနုပညာရရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပိုင်ဖြိုးသုဟာဆိုရင် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေနဲ့ဗီဒီယို ဇာတ်ကောင်းပေါင်းများစွာကို ပီပြင်ပိုင် နိုင်စွာနဲ့ကျရာဇာတ်ရုပ်တိုင်းကို အသက်ဝင်အောင်သရုပ်ဆောင်နိုင်နတဲ့အတွက် အကယ်ဒမီဆုကြီးကိုလည်းထိုက်ထိုက်တန်ထန် ဆွတ်ခူးရရှိထားတဲ့ မင်းသမီးတစ်လက်ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်…။ပိုင်ဖြိုးသု ကတော့ အရမ်းကို အေးချမ်းလွန်းပြီးခင်ပွန်းကောင်းပီသလွန်းတဲ့ ဒါရိုက်တာဏကြီးနဲ့အိမ်ထောင်ကြပြီး သာယာတဲ့ အိမ်ထောင်သည်ဘဝလေးကိုပိုင်ဆိုင် ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူမအပေါ်အရမ်းကိုချစ်ခင်ပြီးသူမဆိုးသမျှကို သည်းခံခွင့်လွှတ်ပေးတတ် တဲ့ရေခဲတုံးကြီးတစ်မျှအေးချမ်းလွန်းတဲ့ ခင်ပွန်းသည်ကို ပိုင်ဖြိုးသုက ချစ်စနိုးနဲ့ ဦးရေခဲကြီးလို့ခေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ပရိတ်သတ်ကလည်း ဒီအခေါ် အဝေါ်လေးကြောင့် သုသုကိုပိုပြီးချစ်နေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။
ပိုင်ဖြိုးသုတို့ဇနီးမောင်နှံဟာ ဆိုရင် လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အခြေအနေတွေမှာ ပြည်သူလူထုနဲ့အတူ တစ်သားတည်းရပ်တည်ခဲ့တာကြောင့် ပရိတ်သတ်တွေက သူမတို့ဇနီးမောင်နှံကို လေးစားနေ ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။သုသုတို့ဇနီးမောင်နှံက လူထုလှုပ်ရှားမှုမှာ နေ့စဉ်နေ့တိုင်း လမ်းပေါ်ထွက်ပြီး ဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်.။အဲ့ဒီလိုလူထုလှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ခဲ့လို့ သူမတို့ ဇနီးမောင်နှံကို ၅၀၅(က)နဲ့အမှုဖွင့်အရေးယူခံခဲ့ရတာပဲဖြစိပါတယ်နော်.။ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပေမယ့်လည်း ရတဲ့ နေရာကနေ ပါဝင်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။
ဒီကနေ့ဟာဆိုရင်တော့ ဒါရိုက်တာ ဏကြီးရဲ့မွေးနေ့လေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။ပိုင်ဖြိုးသုက ခင်ပွန်းဖြစ်သူဏကြီးရဲ့မွေးနေ့လေး ကို ထူးထူးခြားခြားလေးဆုတောင်းပေးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ သုသုက”အသက်(၄၀)မှဘဝကစတာတဲ့…ဦးရေခဲကြီး ဘဝကိုစလုံးရေစရတဲ့ အချိန်မှာမှ စစ်အာဏာသိမ်းခံထားရချိန်နဲ့ကြုံရတာတော့ကျက်သရေမရှိဘူးပေါ့နော်….ဘဝမှာသူ့အတွက် ဒီမိုကရေ စီအမြန်ရရှိပါစေ စစ်အာဏာရှင်အုပ်ချုပ်ခံရမှုမှအမြန်လွတ်မြောက်ပါစေ လို့မွေးနေ့မှာဆုတောင်းပေးရမယ်လို့အိပ်မက်တောင်မမက်ဖူးဘူး… Anyway, I’ll always be by your side, through thick and thin. Haveapeaceful birthday Boo Bear❤️#အရေးတော်ပုံအမြန်ဆုံးအောင်ပါစေ” ဆိုပြီးခင်ပွန်းဖြစ်သူ ရဲ့မွေေးနေ့လေးကို ဆုတောင်းပေး လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။ပိုင်ဖြိုး က သူမရဲ့ခင်ပွန်းဏကြီးရဲ့မွေးနေ့ကို အခုလိုအခြေအနေမျိုးနဲ့ကြုံနေရလို့ စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိတ်သတ်ကြီးရေ…..။ဒါရိုက်တာဏ ကြီးရဲ့မွေးနေ့လေးကို ပရိတ်သတ်ကြီးကလည်း ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးခဲ့ကြပါအုံးနော်….။ဖတ်ရှုပေးတဲ့ပရိတ်သတ်တစ်ယောက်ချင်းစီတိုင်းကို အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်…။